Ma u Baahan Tahay Shuruudaha iyo Xaaladaha, Asturnaanta iyo Xeerarka Kukiyada? | Martech Zone
Isgaarsiinta iyo macaamil ganacsi marwalba way iswada qabsadeen. Tani waa run in kabadan sidii hore, iyada oo helitaankeena sii kordhaya uu sii kordhayo aaladaha internetka, ha ahaato kumbuyuutarradeena, kiniiniyada ama taleefannada gacanta. Sababtoo ah helitaanka deg degga ah ee macluumaadka cusub, websaydhka shirkadda wuxuu u noqday aalad muhiim u ah ganacsiyada inay ku gaarsiiyaan wax soo saarkooda, adeegyadooda, iyo dhaqankooda suuq ballaaran.
Websaydhadu waxay awood siinayaan ganacsiyada iyaga oo u oggolaanaya inay gaaraan oo ay gaaraan macaamiisha cusub iyo kuwa hadda jira adigoo gujinaya badhanka. Marka la eego heerka sare ee ganacsiga ee lagu qabtay qaybta dhijitaalka ah, ganacsatadu waa inay weligood feejignaadaan ilaalinta danaha ay ka leeyihiin howlaha websaydhka. Ilaalinta macaamiisha ayaa si isku mid ah muhiim u ah; iyadoo halista khiyaanada aqoonsiga ay wali ku badan tahay howlaheena internetka, macluumaadka gaarka ah ee isticmaaleyaasha degellada waa in sidoo kale la ilaaliyo.
Uma baahnid inaan sameyno ganacsi ka dhexeeya amniga iyo arrimaha gaarka ah. Waxaan u maleynayaa in tikniyoolajiyaddu ay na siinayso awood aan ku yeelanno labadaba. John Poindexter
Ganacsiyada waxaa laga yaabaa inay la kulmaan dhibaatooyin badan haddii aysan qaadin taxaddarka ku habboon si loo hubiyo in ilaalada saxda ah ay jirto, oo ay ku jiraan dacwadaha dacwadda (oo dherar ahaan u noqon kara, qaali ah oo waxyeello u geysan kara sumaddaada!). Nasiib wanaag, ganacsatadu way xaddidi karaan oo xitaa way ka fogaan karaan guud ahaan dhibaatooyinkaas ka imanaya dhinaca helitaanka xuquuqda shuruudaha iyo xaaladaha (T & Cs) iyo asturnaanta booliskaku qoran websaydhkooda. Kuwani waxay dabooli doonaan ganacsiyada iyo macaamiishooda labadaba si loo hubiyo in labada dhinacba ay howlahooda ku gudan karaan jawi dhib la'aan ah.
Ilaalinta Ganacsigaaga: Shuruudaha Isticmaalka iyo Shuruudaha
Bogagga shabakadaha badankood waxay muujinayaan waxa loo yaqaan shuruudaha isticmaalka, kaas oo u shaqeeya sidii heshiis u dhexeeya milkiilayaasha bogga iyo adeegsadayaashiisa. Shuruudaha noocan oo kale ah sida caadiga ah waxaa ka mid ah:
The xuquuqda iyo waajibaadka inta udhaxeysa milkiilayaasha goobta iyo isticmaalayaasha
Sida loo adeegsado websaydhka iyo waxyaabaha ku jira
Sidee iyo goorta laga heli karo websaydhka
Qof kasta oo deyn ganacsigu wuu imaan karaa mana dhici karo haddii dhibaatooyin ay yimaadaan
In kasta oo haysashada noocaas ah T & Cs aysan ahayn shuruud adag oo sharci ah, haddana waxaa faa'iido leh in lagu daro ereyadaas si ganacsiyada loo siiyo ilaalinta ugu wanaagsan ee ugu macquulsan. Ka-hortagga halkii laga daaweyn lahaa waa fikrad ay ganacsiyada badankood ku shaqeeyaan, sidaa darteedna ka mid noqoshada T & Cs waa mid waxtar u leh sababaha ganacsiga iyo kuwa la taaban karo:
Waxay macnaheedu tahay in macluumaadka ku jira boggaaga ee la xiriira ganacsiyada aysan u furanayn ku xadgudubka isticmaalaha (tusaale ahaan soo dejinta waxyaabaha aan la oggolaan iyo taranka aan la oggolaan).
Ku darista T & Cs waxay u adeegtaa in la xadido wixii masuuliyadeed ee ganacsi ee soo food saari kara; yeelashada shuruudo si cad loo qeexay ayaa ka gaashaaman kara ganacsiyada martida soo booqaneysa kuwaas oo laga yaabo inay rabaan inay talaabo maxkamadeed ka qaadaan xaalad nasiib daro ah
Haysashada sharuudaha adeegsiga waxay u caddaynaysaa ganacsiyada iyo isticmaaleyaasha websaydhkaba; wixii xuquuq ah iyo waajibaadka lagu leeyahay labada dhinacba si cad ayaa loo qeexi doonaa waxayna u oggolaan doontaa labadaba inay sii wataan ganacsigooda.
Ilaalinta Macluumaadka Isticmaalayaashaada: Kukiyada iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Tiro ka mid ah goobaha ganacsiga, gaar ahaan kuwa ku lug leh soo iibinta ama iibinta alaabada iyo / ama adeegyada, ayaa si dabiici ah ugu qasbanaan doona inay ururiyaan macluumaad gaar ah oo ku saabsan macaamiishooda. Ururinta macluumaadka khaaska ah waxay ku martiqaadeysaa baahida loo qabo siyaasad qarsoodi ah oo qarsoodi ah, oo (ka duwan a shuruudaha isticmaalka heshiis) sharciga ayaa u baahan.
Qaanuunka arrimaha khaaska ah ayaa u sheegaya dadka isticmaala arrimaha ilaalinta xogta. Nidaamka waxaa ku jiri doona sida ganacsiyada ay ula macaamilaan macluumaad kasta oo shakhsi ah oo dadka isticmaala ay gacan ka geysan karaan isticmaalka websaydhkooda. Hoos Xeerarka ilaalinta macluumaadka EU, siyaasaddu waa inay jirtaa haddii degel websaydh ah ka ururiyo faahfaahin ay ka mid yihiin magaca macaamilka, cinwaanka, taariikhda dhalashada, faahfaahinta lacag bixinta, iwm.
Kukiyada waxaa loo isticmaalaa in lagu kormeero sida macaamiisha ay u adeegsadaan degel internet ah. Tani waxay u oggolaaneysaa ganacsiyada inay jaangooyaan oo ay horumariyaan khibrada isticmaale ee ku saleysan doorbidka shaqsiga. Websaydhyada waa inay ku jiraan siyaasad ku filan haddii ay ku cabiraan adeegsiga booqdaha qaabkan marka lagu daro u hoggaansamida waxyaabaha soo socda:
Ku wargalinta martida in cookies-ka ay jiraan
Sharaxaya shaqada buskudyada ay sameynayaan iyo sababta
Helitaanka oggolaanshaha isticmaale inuu ku kaydiyo cookie aaladda ay wataan
Sida Shuruudaha iyo Xaaladaha, waxaa jira faa'iido ganacsi oo cad oo ganacsatadu u leeyihiin siyaasad xog hufan oo ku saabsan websaydhyadooda:
Shuruudaha iyo Shuruudaha ayaa gacan ka geysanaya dhisidda kalsoonida iyo kalsoonida ka dhexeysa ganacsiga iyo macaamilka
La'aanta siyaasad sir ah oo ku filan ayaa jebisa mabaadi'da hoosta Sharciga Ilaalinta Xogta. Ganacsiyadu waxay la kulmi karaan ganaaxyo culus jabinta, illaa ,500,000 XNUMX!
Furaha ganacsiyada iyo booqdayaasha barta markay timaado webka ayaa ah amniga marka hore! Labadaba Shuruudaha iyo Xaaladaha iyo Asturnaanta iyo Kukiyadaha kuleylka ee boggaga internetka waa in loola jeedaa hufnaan iyo daahfurnaan, u oggolaanaysa ganacsatadu inay sii wadaan bixinta alaabtooda iyo adeeggooda isla markaana ay macaamiisha u siiyaan hab ay ugu adeegsadaan websaydhada ganacsiga si nabadgelyo leh nabadgelyo maskaxeed. Faahfaahin dheeraad ah waxaa laga heli karaa Xafiiska Komishanka Macluumaadka.
Tags: siyaasadda cookiesharciga ilaalinta xogtaXafiiska Komishanka MacluumaadkasharciQaanuunka Arrimaha Khaaska ahshuruudaha iyo xaaladahashuruudaha isticmaalkashuruudaha isticmaalka